Fanafihana mpivarotra omby :: Rotiky ny bala ny fiarana zandary iray avy noentin’ny jiolahy • AoRaha
Fanafihana mpivarotra omby Rotiky ny bala ny fiarana zandary iray avy noentin’ny jiolahy
Jiolahy iray voasam­botra, basy poleta iray sy bala maromaro, fanamiana mpitandro fila­minana iray, sarina zandary iray miasa eny amin’ny Toby Ratsimandrava ary vola 16 tapitrisa ariary no vokatra azo tamin’ny fanenjehana jiolahy avy nanafika mpivarotra omby, teny Ampanotokana, tamin’ny zoma hariva lasa teo.
Sarona ihany koa ny fiara iray ana zandary efa rotiky ny bala avy noentin’ireo olon-dratsy. Tonga hatrany Ambohi­dratrimo ny fifampi­tifirana tamin’ireo jiolahy saingy tafaporitsaka ny sasany. Vola telo sakaosy no lasan’izy ireo, izay an’ireo mpivarotr’omby.
“Avy nivarotra omby nikasa ny hody ireo mpandraharaha amin’ny omby no notafihin’ ireo jiolahy nandeha môtô, tany Ampanotokana, tamin’io zoma hariva io. Nitsoaka nihazo an’i Mahitsy ireo
jiolahy niaraka tamin’ny vola telo sakaosy. Nisy nampandre ny zandary teo Mahitsy ka nanao sakana. Fantatra fa niova fiara ireo jiolahy rehefa hiditra ny tanànan’i Mahitsy, teo amin’ny toerana atao hoe : “charbon”. Fiara marika “Peugeot 309” no nitondra azy ireo indray”, hoy ny fitantaran’ireo zandary nanenjika ireto jiolahy ireto.
Tonga teo Andakana dia niala tao anatin’ilay fiara ny iray tamin’izy ireo ka nandeha taksibe. Efa nahalala ny fiara nandehanan’izy ireo anefa ny zandary tamin’io, ka nanen­­jika avy aoriana hatrany. Noraisim-potsiny ilay jiolahy nandeha taksibe, vantany vao niala kely an’Andakana-Ambohidra­trimo. Nanao sakana teo akaikin’ny tobin’ny Vitogaz, eo Alaka­­­misy, ny zandary avy eny Ambohidratrimo saingy voadingan’ireo jiolahy hatrany. “Rehefa tsy nety nijanona ny fiara noentin’ireo jiolahy dia notifirina fa mbola tafatsoaka ihany. Efa nisy andiana zandary hafa indray anefa tamin’io avy any Ambohidratrimo, ka voatery nijanona teo amin’ny sampa­nana mihazo ny lalana mipoitra any Ambohitri­man­jaka ny fiara nitondra iretsy jiolahy. Samy namonjy nitsoaka izy ireo taorian’izay, minitra vitsy monja tsy nahatongavan’ireo zandary avy any Ambohidratrimo teo amin’ilay toerana. Vokatr’io fitsoahana maimaika io no naha­tavela ny iray tamin’ireo sakaosy feno vola 16 tapitrisa ariary latsaka kely sy ny basy ary zavatra hafa tao anaty fiara”, hoy hatrany ny loha­ranom-baovao. Fantatra fa an’ny zandary iray miasa eto an-drenivohitra ity fiara “Peugeot 309” ity.
Famatsiana Hotazonina ny vidin-tsolika hatramin’ny septambra
Fanafihana ravan’ny zandary :: Jiolahy roa maty voatifitra teo am-pibatana volabe